Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » China na Dominica mepere njem n'etiti mba abụọ ha ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ gbasara Dominica • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ịbinye aka na nkwekọrịta n'etiti China na Dominica
Dominica na China enweela mmekọrịta dị ogologo kemgbe ha malitere mmekọrịta mba na 2004. Taa, mba abụọ ahụ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka njem n'enweghị visa n'etiti mba ha. Ụmụ amaala nke mba abụọ ahụ nwere ike ịgagharị azụ na azụ na-achọghị visa ọpụpụ.
Mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ a gụnyere itinye ego China na ngalaba ahụike Dominica na nraranye nke ụlọ ọgwụ enyi Dominica-China, nke agbanweelarị akụrụngwa ahụike nke agwaetiti ahụ. Ụlọ ọgwụ ahụ bụ naanị onye na-enye ọrụ MRI na mpaghara Eastern Caribbean, ihe ọ rụpụtara mere site na mmekọrịta siri ike n'etiti mba abụọ ahụ.
Afọ gara aga ahụla Obere agwaetiti Dominica gbatịkwuo mba ụwa. Nkwekọrịta maka ịhapụ visa ga-enyere Dominicans aka ịnweta otu n'ime nnukwu akụ na ụba ụwa, na-akwado ohere njem maka azụmahịa na ntụrụndụ. Citizensmụ amaala Dominican nwere ike ịga njem na-enweghị visa ma ọ bụ visa na-abịarute ihe karịrị mba 160, na-aza ihe karịrị 75% nke ebe ụwa na-aga nke na-eme ka azụmaahịa na mba dị iche iche dị mfe.
N'otu aka ahụ, paspọtụ China na-enye ohere ịnweta visa n'efu na mba na ókèala 79. Onyinye a kpaara ókè na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbochi nye ụmụ amaala ya ịnweta ebe zuru ụwa ọnụ dịka United Kingdom ma ọ bụ United States. Nke a pụtara na ụmụ amaala China ga-agarịrị n'ọgba aghara ọchịchị nke inweta visa, imefusị oge, ego na akụrụngwa bara uru.
A pụkwara ikwu otu ihe ahụ nye ndị na-atụ anya ịzụ ahịa na China. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọchụnta ego na ndị ọchụnta ego sitere na mba ndị dị ka India, South Africa, Nigeria, ma ọ bụ Singapore ga-amali elu n'ụdị hoops, n'ihi na ha na China enweghị nkwekọrịta visa. Nke a na-achọ imejupụta akwụkwọ ogologo oge nke nwere ike iduga ohere efu nke na-emetụta azụmahịa.
"China anaghị ekwe ka ọtụtụ ndị ji paspọtụ nweta visa n'efu, ha enyewokwa ikike ahụ na paspọtụ Dominican nke ụdị niile. Yabụ, ọ bụ nnukwu mgbakwunye, "Prime Minister Roosevelt Skerrit kwuru. Ọ gbakwụnyere, "[ụmụ amaala Dominican] ga-enwe ike ịga njem n'ọtụtụ ebe azụmahịa n'ofe ụwa."
Onyinye visa sara mbara Dominica bụ otu n'ime ihe kpatara agwaetiti a ji bụrụ ebe mara mma maka ndị na-etinye ego na-achọ nnwere onwe njem ka ukwuu. Mmemme nwa amaala Dominica site na itinye ego (CBI) abụrụla ụzọ ama ama iji nweta nke a. Ntọala guzobe na 1993, mmemme ahụ na-enye ndị na-etinye ego n'ụwa niile ikike site n'inye ha nwa amaala nke abụọ na uru niile metụtara ya ozugbo enyere onyinye na ego gọọmentị mba ma ọ bụ ụlọ ala. Dị ka mmemme ama ama n'ụwa niile, Dominica na-ahụ na ndị ghọrọ ụmụ amaala gafere usoro nleba anya n'ọtụtụ dị iche iche iji chebe aha ọma ya.
N'ime iri afọ ole na ole gara aga, mmemme Dominica anabatala ọtụtụ ndị na-etinye ego na China bụ ndị nwere mmasị inweta nwa amaala nke abụọ dịka ụzọ isi chebe akụ na ụba, ezinụlọ na ọdịnihu ha. Wezụga ohere njem, ịbụ nwa amaala Dominica na-enyere ezinụlọ aka ịnweta ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha elu n'ụwa, chọpụta atụmanya azụmaahịa ọzọ na ohere ego na mba nwere njikọ na ndị ike ndị ọzọ dị ka United Kingdom na United States.